အယ်ဖိုး: January 2010
selection icons (70)
ဒါကတော့ ကျွန်တော် selection ရွေးထားတဲ့ icon အခု 70 ကျော်ပါ . အရမ်းကြိုက်လို့ သီးသန့် ခွဲထားတာ . အတော်လေးကို လှတယ် . လိုချင်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ .
Download ifile.it | Download mediafire | Download multiupload | Download
Posted by Peace at 2:55 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 2:52 PM0comments Links to this post
ဒီရက်ပိုင်းက အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းတက်နေတော့ မိမိလေ့လာမိတာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်တာ များနေတယ်။ အင်တာနက်မှာ ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ တွေ့လာတာက စကားလုံးတူတွေကို ဖော်ပြတဲ့ WordWeb ဆော့ဝဲလ်လေး။ ဒီဆော့ဝဲလ်က အောက်အချက်တွေ သုံးလို့ရတာ တွေ့ရတယ်။
မိမိ လက်ရှိနေတာ Dictionary နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုက Babylon ။ နောက်တစ်ခုက WxpyDict လေးပါ။ နှစ်ခုလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ အခု ရလာတဲ့ WordWeb နဲ့ဆို တော်တော် ပြည့်စုံနေပြီ။